Traditional kuongorora dzakavharika, Kuchifinha, uye vakabviswa upenyu. Zvino tinogona kubvunza mibvunzo yakawanda midzi muupenyu, zvakawanda akazaruka, uye mafaro kupfuura.
Zvachose Ongororo Kukanganisa framework inokurudzira vatsvakurudzi kufunga ongororo tsvakurudzo sechinhu vaviri rutivi kwacho: arirwise vakabvunzwa achivabvunza. Munguva yapfuura chikamu Ini akakurukura sei digitaalinen zera Kuchinja sei isu rokutsvaka vakabvunzwa, uye ikozvino pandichazofunga kukurukura sei digitaalinen zera inoita itsva nzira kubvunza mibvunzo. Nzira itsva iyi inogona kushandiswa kana fungidziro ivhu kana asiri fungidziro ivhu.
Kuongorora nzira ndiyo nharaunda umo mibvunzo yabvunzwa, uye unogona kuva ekushandiswa zvinokosha yakayerwa (Couper 2011) . Mune wokutanga yaitonga kutsvakurudza kuongorora inonyanya muoti chaiva chiso nechiso, uye yechipiri nguva vakawanda muoti waiva runhare. vaongorori vakawanda vanoona wechitatu yaitonga kutsvakurudza ongororo somunhuwo pakuwedzera ongororo modes kubatanidza makombiyuta uye dzeserura. Zvisinei, digitaalinen zera kunopfuura chete kuchinja mune zvikwepa kuburikidza iyo mibvunzo nemhinduro ndokuyerera. Pane kudaro, achichinja kubva analogue kuna digitaalinen anogonesa-uye zvichida zvinoda-vatsvakurudzi kuchinja sei zvatinokumbira.
A chidzidzo Michael Schober uye nevamwe inoratidza zvakanakira kuchinja edu achibvunza kuti nezvaanogona uye patsika dzemunharaunda kumativi michina mitsva (Schober et al. 2015) . Munguva yokudzidza, Schober uye nevamwe akaenzanisa nzira dzakasiyana nokubvunza vanhu mibvunzo vachishandisa serura. Vaienzanisa inzwi kukurukurirana, izvo kunge dzinongoitika shanduro yechipiri yaitonga nzira, kuti kuunganidza mashoko vachishandisa zhinji mameseji, imwe nzira pasina pachena muenzaniso. Schober uye nevamwe vakawana kuti kutumira kwakatungamirira dzakakwirira unhu Data pane izwi kubvunzurudza. Nemamwe mashoko, anongoti uyevo akwegura Nzira pana michina mitsva yakanga isiri yakanakisisa nzira. Asi, vatsvakurudzi vachafanira gadzirisa nzira yedu tichikumbira kuti platforms itsva idzi.
Kune miganhu dzakawanda pamwe iyo vatsvakurudzi zvinogona kuiswa mumapoka ongororo modes, asi zvikuru dzinonetsa cheshanduro digitaalinen zera ongororo modes ndechokuti vari kombiyuta-wakawanda, pane aibvunza-raitongwa (sezvakunoitwa norunhare uye chiso nechiso kuongorora). Kutora interviewers yevanhu kubva mashoko muunganidzwa muitiro inopa kukuru zvikomborero uye rinounza zvimwe zvainovhiringidzawo. Tichitevera makomborero, achibvisa interviewers zvinoshamisa kunoderedza mari-kubvunzurudza tiri mumwe guru zvinodiwa ongororo tsvakurudzo-uye inowedzera kunzwisisa; vakabvunzwa vanogona kubatanidzwa kana vachida, kwete chete kana ane kubvunzurudza iripo. Zvisinei, achibvisa anokubvunzurudza uyewo dzisakwanisa kuongorora mune dzimwe nzira. Kunyanya, interviewers vari dzinonetsa kuti achikurudzira vakabvunzwa kuti chinhano uye kuhuchengetedza kuroorana apo slogging kuburikidza refu uye neapo richikunetesa kuongorora.
Zvadaro, Ndichaenda kutsanangura nzira miviri inoratidza sei vatsvakurudzi vanogona kushandisa maturusi ari digitaalinen zera kubvunza mibvunzo yakasiyana: kuyera dzomukati inoti pane imwe nguva yakakodzera uye nenzvimbo kuburikidza zvipenyu duku kuongorora (Section 3.5.1) uye mubatanidzwa zvinokwaniswa pachena-apera uye pedyo-ndokuguma kuongorora mibvunzo kuburikidza wiki Vasai kuongorora (Section 3.5.2). Zvisinei, danho kombiyuta-wakawanda, ubiquitous achibvunza muchagarawo zvinoreva kuti tinofanira kugadzira nzira achibvunza kuti zviri kunakidza kuvatori vechikamu, muinonzi gamification (Section 3.5.3).